Tuesday October 16, 2018 - 12:15:08 in Wararka by Warsheekh Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan Weerar xalay dagaalyahano ka tirsan Ururka Al-shabaab ay qaadeen Bar Kontarool ay ku sugnaayeen Ciidamo ka tirsan dowlada Soomaaliya,kaasi oo ku yaalla dhinaca Koonfureed ee Magaalada Jowhar.
Waxaa la sheegay in weerar kadib, halkaasi uu iska hor imaad socday muddo ku dhexmaray shabaabka weerarka soo qaaday iyo Ciidamadii joogay kontaroolka la weeraray,waxaana ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac.
Dadka deegaanka Magaalada Jowhar ayaa waxaa inoo sheegeen inay xalay maqleen rasaas xoogan oo ka dhaceysay Kontaroolka Koonfureed ee Magaalada Jowhar,isla markaana weerar kedis ah Al-shabaab ay ku qaadeen.
Ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa Ciidamada joogay kontaroolka ayaa ku dhintay dagaalkii xalay,halka mid kelana dhawaac xoogan uu soo gaaray,waxaana la Ogeyn Khasaaraha gaaray dagaalamayaashii ka tirsanaa Al-shabaab ee soo qaaday weerarka.
Kontaroolka Al-shabaab ay weerarka ku qaadeen xalay ayaa waxa uu ku yaallaa meel ku dhow Hoyga uu degan yahay Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo guriga Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan.
Weerarkan ayaa waxa uu soo aadayaa xili shalay Magaalada Jowhar ee Caasimadda Hirshabeelle uu gaaray Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliyab Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hogaaminayay,waxaana kamid ahaa Wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaalle iyo Taliyaha Booliska Soomaaliyeed.
Magaalada jowhar ayaa waxaa saakay howlgalo amniga lagu xaqiijinayo ka wada Ciidamada dowlada Soomaaliya,iyagoona ku raad jooga xubnahii weerarka xalay ku qaaday Kontarool ay ku sugnaayeen Ciidamo ka tirsan dowlada Soomaaliya,kaasi oo ku yaalla dhinaca Koonfureed ee Magaalada Jowhar.